Dalkaan.com -Wararka Ugu Danbeeyey » Askari u Dhashay Uganda oo Meydkiisa Laga Helay Saldhig Ku Yaala Muqdisho
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Edward bagonza ayaa meydkiisa laga helay magaaladda muqdisho maaaalinamadii sabtiga aheyd sida uu sheegay Madaxa ciidamada booliska qeybta taageerada maamulka sarkaalka lagu magacaabo turyangumanawe.
Qoraal kooban oo uu soo saaray habeenimadii xalay sarkaalka lagu magacaabo turyangumanawa ayuu ku xaqiijiyay geerida lama filaanka ah ee sarkaalka booliska ugaandha ninka lagu magacaabo bogonza faahfaahin dheeraad ah kama uusan kabixin geerida sarkaalka meydkiisa laga helay magaaladda muqdisho.
Qoraaalka uu soo saaray sarkaalka lagu magacaabo turyangumanawa ayaa uqornaa sida tan
“waxaa laga helay meydkiisa halka uu dagaanaa oo ah magaalada muqdisho subaxnimadii hore ee sabtida “ fahfaahin intaa kabadan kama uusan bixin sarkaalku meydka sarlkaalka lagu magacaabo bogonza oo meydkiisa laga helay magaalada muqdisho subaxnimadii sabtida.
Ciidamada amaanka ugaandha ayaa horay waxaa uga dhintay saraakiil farabadan oo kamid ah kuwa millitariga iyo booliska kuwaasi oo ku dhintay dagaallo ey lagaleen xarakada alshabaab dagaaaladaas oo ka dhacay qeybo kamid ah gudaha dalka Somalia.
Sanadii 2017 12 kamid ah ciidamada militariga ugaandha ayaa ku geeriyooday dagaal ay kusoo qaadeen dagaalyahadanada alshabaab inkastoo ay beeniyeen saraakiisha ciidamada militariga ugaandha dagaaladaas oo dhacay dhamaadkii sanadkii 2017.
Afhayeen u hadlay ciidamada milatariga ugaandha oo lagu magacaabo brig Richard karemire waqtigaas ayaa tilmaamay in weerar lagu ladilay saraaakiil katirsan milatariga ugaandha dagaalkaasi oo kadhacay saldhiga ey ciidamada ugaandha kulahaayeen degmada buulamareer iyo deegaanka golween oo hoostaga gobalka shabeelaha hoose.
Previous articleShirka Dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug oo isku badalay Seminaar Warbarasho